Ruzivo rwe thermocouple uye chengetedzo solenoid vharafu yegesi chitofu - Nhau - Ningbo Aokai Security Technology Co., Ltd
Zivo ye thermocouple uye chengetedzo solenoid vharafu yegesi chitofu
Iyo junction (musoro) ye thermocouple inoiswa mumoto wepamusoro-tembiricha, uye iyo inogadzirwa electromotive simba inowedzerwa kune coil yechengetedzo solenoid valve yakaiswa pavharuvhu yegesi kuburikidza newaya mbiri. Simba rekusveta rinogadzirwa nesolenoid valve rinotora armature muvharuvhu ye solenoid, kuitira kuti gasi riyerere kumuromo kuburikidza nevhavha yegesi.
Kana iwo murazvo ukadzimwa nekuda kwezvikonzero zvetsaona, simba remagetsi rinogadzirwa neiyo thermocouple rinonyangarika kana kupotsa ranyangarika. Kukweva kwevhavha ye solenoid inonyangarika kana kupera simba zvakanyanya, ruoko rwunoburitswa pasi pechirimo, chitubu chakaiswa mumusoro waro chinovhara gomba regesi muvharuvhu yegasi, uye vharafu yegasi yakavharwa.
Nekuti iro simba remagetsi rinogadzirwa neiyo thermocouple haina kusimba (mamirivolti mashoma chete) uye yazvino idiki (makumi emamirioni chete), iko kukwezva kwekuchengetedzwa kwesolenoid valve coil ishoma. Naizvozvo, panguva yemoto, shaft yevhavha yegesi inofanira kumanikidzwa kuti ipe simba rekunze kuchombo chiri padivi peaxial direction, kuitira kuti chombo chiiswe.
Muyero mutsva wenyika unotaura kuti nguva yekuvhura yevhavhavhavha yekudzivirira ndeye â‰¤ 15s, asi kazhinji inodzorwa nevagadziri mukati me3 ~ 5S. Iyo nguva yekusunungurwa yekuchengetedza solenoid valve iri mukati me60s zvichienderana neyakajairwa yenyika, asi kazhinji inodzorwa nemugadziri mukati me10 ~ 20s.
Kune zvakare inonzi "zero yechipiri kutanga" mudziyo wekudzimisa, uyo unonyanya kutora chengetedzo solenoid valve ine macoil maviri, uye coil ichangobva kuwedzerwa yakabatana neinononoka dunhu. Panguva yekudzima, dunhu rekunonoka rinogadzira ikozvino kuchengetedza solenoid valve iri munzvimbo yakavharwa kwemasekonzi akati wandei. Nenzira iyi, kunyange kana mushandisi akakurumidza kusunungura ruoko rwake, murazvo hauzodzimi. Uye kazhinji vanovimba neimwe coil kuchengetedza kuchengetedza.
Iyo yekumisikidza chinzvimbo cheiyo thermocouple yakakoshawo zvakanyanya, kuitira kuti murazvo ugone kunyatso kubikwa kumusoro weiyo thermocouple panguva yemoto. Zvikasadaro, iyo thermoelectric EMF inogadzirwa neiyo thermocouple haina kukwana, kuyamwa kwekuchengetedza solenoid vharuvhu coil idiki kwazvo, uye chombo hachigone kupinzwa. Iyo nhambwe pakati pemusoro we thermocouple uye chifukidziro chemoto chinowanzoita 3 ~ 4mm.
Previous:Ungachengetedza sei gasi solenoid vharafu?